MAJA Announcement: (1) Honda Y-E-S 2017 Third Screening Exam will be held at MAJA Centre on 6th August 2017 (Sunday) at 1:00 pm. (2) Best Prize Awarding Ceremony of 12th Japanese Translation Contest 2017 and the Japanese Story Translation will be held at Park Royal Hotel on 20th August 2017 (Sunday) at9am. (3) Announcement of Vacancy for Office Staff at Japan Culture House.
Honda Y-E-S 2017 (တတိယဆင့် ရွေးချယ်ခြင်းစာမေးပွဲ)
ဒုတိယအဆင့် ရွေးချယ်ခံရသည့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး မှ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများမှာ စာရင်းမှာ ပုံပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ရွေးချယ်ခံရသည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် တတိယအဆင့် ရွေးချယ်ခြင်းစာစီစာကုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖြေဆိုရပါမည်။
၁.) စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားကဒ်များ ယူဆောင်လာရပါမည်။ စာမေးပွဲဖြေရာတွင် Y-E-S (M) XXXX / Y-E- S ( Y ) XXXX ခုံနံပါတ်နှင့် ဖြေဆိုရပါမည်။
စာမေးပွဲအချိန် ။ ။ နေ့လည် ၁ နာရီ မှ ၃ နာရီအထိ
(** Orientation ရှိသည့်အတွက် ၁၂ နာရီ အရောက်လာပေးကြပါရန်။**)
နေ့ရက် ။ ။၆.၈.၂၀၁၇ (တနင်္ဂနွေ)
နေရာ ။ ။ ၁) MAJA Centre ၂ လွှာ၊ တိုက် (C)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်။
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)တို့ မှ ကျောင်းသား/သူများသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ MAJA Centre သို့လာရောက်ဖြေဆိုပါရန်။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း (MAJA) သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၁၂ ကြိမ်မြောက် ဂျပန်စာပေဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲ (၂၀၁၇) တွင်ဆုရရှိသူ ၃ ဦးမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ် ပါသည်။
Chan Myat Thu (Ms.) (Roll No.MA 001)
Khaing Wut Yi Thein (Ms.) (Roll No. MA 017)
Khant Min Thit (Mr.) (Roll No. MA 021)
Su Myat Noe (Ms.) (Roll No. - Y I 017)
ဂျပန်စာပေဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲအတွက် ပထမ၊ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုများကို ဂျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ကြေငြာကာ ဆုများချီးမြင့်မည်ဖြစ်ပါ၍ ဆုရှင်များ အောက်ပါအစီစဉ်အတိုင်း လာရောက်ပေးကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အချိန်။ ။ 9နာရီ မှ 12 နာရီအထိ
နေ့ရက် ။ ။ 20.8.2017 (တနင်္ဂနွေနေ့)
နေရာ ။ ။ Parkryoal Hotel
• တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
• ဂျပန်စာအခြေခံရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
• လစာ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
• အလုပ်ချိန် - ၉:၀၀ မှ ၁၇:၃၀ ထိ ( တစ်ပတ်လျှင် ၂ ရက် နားရမည် )
CV အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာရေးသား၍ ရရှိထားသော မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ Certificate မိတ္တူများနှင့်အတူ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ MAJA ရုံးခန်းသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။